कमरेड एमाले नै हुँ भन्न सुहाउँछ र ? – मिलिजुली खबर
कमरेड एमाले नै हुँ भन्न सुहाउँछ र ?
in गृहपृष्ठ, फिचर, राजनीति
काभ्रेमा माधव नेपाल समूहले एमालेका नेता आधा भन्दा बढी आफुतिर र कार्यकर्ता आधा आधा भनेर दाबी गर्न छोडेको छैन् । जे होस् । जो जता सुकै हुन् । अहिले पूर्व जनप्रतिनिधि भन्दा यी पाँच जना वर्तमान जनप्रतिनिधिको अनुहार हेरौँ । पुराना कमरेडहरू भन्दा उहाँहरू नै बढी चर्चामा हुनुहुन्छ ।
पुराना कमरेडहरूले विचार फरक बोक्नु भयो । तर तपाईहरूले जस्तो यति ठूलो जनमत भएको पार्टी सिध्याउने गतिविधि गर्नुभएन । र त नेता बनिरहनुभयो । हामीले आर्दश मानि रह्यौ । पार्टीको हित विपरितका गतिविधि सहभागी हुनुभएन । आफु, आफ्नो समूह भन्दा पार्टी र संगठनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुभयो ।
काभ्रे संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ सहित त्यस अन्तर्गतका दुईवटै प्रदेश सांसद एमालेले जित्यो । सेट नै एमालेको । भलै अहिले संघीय संसद विघटन छ र गोकुल बाँस्कोटा सांसद हुनुहुन्न । संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश (क) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद लक्षमण लम्साल पहिलेदेखि नै बाँस्कोटाको विपरित विचार समूहमा हुनुहुन्थ्यो । अर्थात् फरक गुट । तर संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश (ख) बाट निर्वाचित सांसद बसुन्धरा हुमागाईले भने धेरै कार्यकर्ता र शुभचिन्तक लाई माथ खुवाउने गरी गुट फेर्नुभयो । अझ भनौ बाँस्कोटाको साथ छोडेर टोक बहादुर वाईबा क्याम्प पुग्नुभयो ।
हुमागाईले गुट फेर्नु धेरैलाई नसोचेकै भयो । कता कता हुमागाईको फेसबुक स्टाटसहरू हेर्दा र पढ्दा उहाँ आफैले मात्रै चाहेर बाँस्कोटाको साथ छोड्नुभयो भन्ने प्रश्न बिचराधिन अवस्थामै छोड्नु पर्ने हुन्छ । हुमागाईलाई चिन्ने जान्ने कयौँ कार्यकर्ताहरू पछिल्लो फेरिएको रूपसँग परिचित थिएनन् । हुमागाईले त्यस्तो बेला गुट फेर्नुभयो जति बेला को एमाले, एमालेमै रहने र को एमाले माओवादीसँग जाने भन्ने छिनोफानो चल्दै थियो ।
केन्द्रमा काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव नेपाल अघि सर्ने र एमालेले राष्ट्रिय सभाको उप निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका राम बहादुर थापाको पक्षमा मतदान नगरेपछि काभ्रेका यी पाँच जना जनप्रतिनिधिले अब पनि एमाले नै हुँ भन्न सुहाउँछ र ? तपाई पाँचै जनाले पक्कै पनि सोच्नु न भयो होला । के तपाईको अन्तर आत्माले अझै पनि एमाले नै हो भन्छ ? अझै गम्भीर भएर सोच्नुस है ।
बादलको बिपक्षमा मतदान गरे बापत काभ्रे संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत प्रदेश (क) का लक्षमण लम्साल र (ख) का बसुन्धरा हुमागाईलाई एमाले संसदीय बोर्डले स्पष्टीकरण मागेको थियो । उहाँहरूले स्पष्टीकरण बुझाइपनि सक्नु भएको छ । काभ्रेका २ सहित १४ जना प्रदेश सांसदलाई एमाले संसदीय बोर्डले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उनीहरूले बुझाएका स्पष्टीकरण अध्ययन गर्दै होलान् संसदीय दलका नेता ।
बादलको बिपक्षमा मतदान गर्ने एमालेबाट निर्वाचित नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख अनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने स्पष्ट सन्देश एमाले बाग्मती प्रदेश कमिटी अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले दिईसक्नु भएको छ । प्रदेश सांसदलाई संसदीय दल र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पार्टी प्रति निभाएको भुमिकाको उच्च मुल्याङ्कन गर्दै कारबाहिको डण्डा चलाउने निश्चित प्रायः छ ।
माधव समूहले काभ्रेमा नवौँ जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष टोक बहादुर वाईबा रहेको समूहनै एमालेको संस्थापन भन्ने गरेको सुनिन्छ । तर आफ्नै पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरूद्ध अन्य दलसँग साँठगाँठ गर्ने र त्यसैको मतियार बन्नेहरू संसदीय अभ्यास गरिरहेको मुलुकमा अधिवेशन, महाधिवेशन वा दलभित्रको जुनसुकै निर्वाचन जितेर, जतिसुकै लोक प्रिय मत ल्याए पनि संस्थापन हुनै सक्दैन ।
किन कि दलको ह्वपी नमान्ने ब्यक्ति त्यो दलको हो भन्ने हैसियत कुनै बखत पनि राख्दैनन् । ल एकैछिन मानौ, टोक बहादुर बाईव संस्थापन अध्यक्ष नै हो । यदि हो भने सर्वोच्चत अदालतले एमाले र माओवादीलाई आ आफ्नो दलमा फर्क भनेपछि बनेपाको पार्टी कार्यालय खोलेर पदाधिकारी र सबै जनवर्गीय संगठनका प्रमुखलाई बोलाएर हिजोका तिता मिठा बिर्सन कुनै कोशिस गरेको पाईयो त ?
बाहिर बाहिर काभ्रेमा संस्थापन पक्ष हामी भन्दै माधव समूह हिड्ने । पार्टी कार्यालय खोलेर पार्टी गतिविधि अघि बढाउन नसक्ने । अनि कसरी भन्न सुहाउँछ संस्थापन ? के हो संस्थापनको गतिलो उदाहरण केन्द्रमा केपी ओलीबाट सिक्दा पर्याप्त हुन्छ । आफ्नो अनुहार समेत हेर्न नमान्ने माधव नेपाललाई ओलीले कसरी सिंह दरबारसम्म पुर्याए ।
जब जेठ ६ गते दलको आधिकारिक उम्मेदवारलाई पराजित गराएर हाँस्दै छुटिने मध्यमै पर्छन् यी पाँच अनुसार पनि । त्यो दिन देखिनै काभ्रेमा तपाई पाँच जनाले एमाले हुँ भन्ने नैतिक र वैधानिक आधार गुमाईसक्नु भयो । तपाईहरूलाई फगत एउटा सेतो पनामा कालो अध्यक्ष लेखेको पत्र बाँकी होला ।
केन्द्रमा भएका राम्रा कुराको उदाहरण लिनुस्, सिक्नुस् । त्यो काठमाडौँमा हुने नराम्रा चिज जिल्लामा अंगिकार गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन । तपाई पाँच जना जनप्रतिनिधिले काभ्रेमा सिँगो एमालेको प्रतिनिधित्व गर्ने त होइन । तर तपाई एमालेको उम्मेदवार र तपाईलाई जिताउन सूर्य चिन्हमा भोट हाल्नुस है भनेर गाउँघरका बाआमा, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरुलाई भन्दै हिडेको दिन र आज तपाईहरूले जिल्ला पार्टी कमिटीभित्र गरेको गद्दारीपन झलझली सम्झिरहेको छु ।
यति पढ्दै गर्दा एमालेमै फर्केर तपाईलाई अघिल्लो पटक चुनाव जिताएकालाई यो पटक गुण लगाउनुहोस् भन्ने शुभकामना पनि छ है कमरेड । संगठन मजबुद र धेरै कार्यकर्ता भएको पार्टी हो एमाले । म त फर्कनुहोस् । तर नफर्केने आदेश छ भने पनि एमालेले लगाएको गुण नर्बिसनुस् । नयाँ दलमा अबद्ध हुनुभयो भने प्रतिस्पर्धा गरौँला माटो, हावा र पानी सुहाउँदो गरी ।
बनेपा -१० का जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीलाई झरीले छेकेन सं क्रमितको घर पुग्न